February 2017 - Ceelhuur Online
February 28, 2017 admin337
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa magacaabay la taliyaha dhanka arimaha Bulshada, sida lagu sheegay Digreeto ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha Somaliya. Caasho Abokar Qaasim, ayaa loo magacaabay la taliyaha dhanka arimaha Bulshada Madaxweynaha Soomaaliya sida lagu daabacay Warbaahinta Dowladda. Haweenaydaan ayaa la sheegay inay khibrad u leedahay dhanka arimaha Bulshada, sidaasi awgeedna loogu magacaabay […]
February 28, 2017 February 28, 2017 admin243
Waxaa goordhow ka furmay magaalada Muqdisho shir heer sare ah oo looga hadlayo gurmadka abaarta dalka ka jirta, shirkan ayaa waxaa daahfuray Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Shirkan oo hal maalin ah ayaa waxaa ka qeybgalaya Ra’iisulwasaare ku xigeenka dalka Maxamed Cumar Carte, Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Federaalka C/raxmaan Odawaa, Wasiirka Amniga, wasiirka […]
February 28, 2017 admin238
Raysalwasaaraha magacaaban ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa lagu wadaa in maalinta berri ah ee Arbacada uu hortago baarlamaanka. Baarlamaanka ayaa maalinta berri ah ee Arbacada waxaa u furmi doona kalfadhigoodi kowaad. Madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa furaaya kalfadhiga. Madaxweyne Farmaajo ayaa xildhibaanada horgeynaya raysalwasaaraha uu magacaabey waxaana uu weydiisanayaa in ay […]
February 28, 2017 admin257
Waxaa goor dhow qarax xoogan uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaa wadada Buundooyinka ee kala qeybisa degmooyinka Xamar Jajab iyo Waabari ee gobolka Banaadir iyadoo warar kal duwan ay kasoo baxayaa qasaaraha qaraxaasi. Gaari nuuca raaxada ayaa la sheegay inuu halkaasi ku qarxay kaas oo marayey wadada waxaana lasoo wariyey inuu ahaa qarax mid […]
February 27, 2017 admin270
Somalia’s President Mohamed Abdullahi Farmajo has appointed Mr Hassan Ali Kheyre as his prime minister. The announcement was made Thursday, a day after the president’s inauguration ceremony held at a heavily guarded airport zone in the capital Mogadishu. Kheyre, a Somali-Norwegian, is a former regional director (Horn of Africa and Yemen) of Norwegian Refugee Council, […]
February 27, 2017 Duceysane245
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa Gaari Walxaha Qarxa siday oo ay qabteen Ciidanka ammaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ku Qarxay Ex Control Afgooye. sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka. Gaarigan ayaa waxaa gacanta ku dhigay Ciidanka ammaanka Degmada Deyniile, kadib markii ay ka war heleen in uu siday Qarax, intaasi kadibna uu Qarxay Gaariga. […]
February 27, 2017 February 27, 2017 Duceysane237
Guddoonka Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa shaaciyey in Kalfadhiga 1aad ee Golaha Shacabka uu si rasmi ah u furi doono maalinta Arbacada ah ee soo socota oo ay taariikhdu ku beegan tahay 01-March-2017. Guddoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan “Jawaari” ayaa yiri “waxaan ku wargelinayaa Jaalleyaasha Golaha Shacabka in ay […]
Gubashada Bakaaraha: wax aan ka barano waayaha.
February 27, 2017 admin224
Sanad kasta in dab nuucaani oo kale ah uu ka kaco suuqa laba jeer ama ka badan, waxa ay dhaawac wayn ku tahay koboca dhaqaalaha dalka. si gaar ahna waxay dhabar jab ku tahay ganacsatada maalmoodu baaba’ay iyo dadka ku tiirsan. Sida caqliga wanaagsani keenayo waa in la raadiyaa xal dhibkan hoos loogu dhigayo, iyadoo […]
Shabakadda Ceelhuur Online oo u dabaaldagaysa sanadguuradii 3-aad
February 27, 2017 February 27, 2017 admin218
Shabakadda Ceelhuur Online ayaa maanta u dabaal dagaysa sanad guuradii saddexaad ee ka soo wareegtay asaaskeeda, waxaana la asaasay 27 Feberaayo 2014, Shabakadaan ayaa ah mid madaxbanaan, kana faaloota arimaha siyaasada, bulshada iyo dhaqaalaha Soomaaliya, waxaana waxaana lagu soo gudbiyaa aragtiyo kala duwan. Xarunta warbaahinta waa magaalada Cadaado xarunta kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka Galmudug, […]
Cabdullaahi Baarleex oo isku soo sharaxay madaxwaynaha Galmudug
February 27, 2017 admin334
Madaxwaynihii maamulkii Ximan iyo Xeeb C/llahi Cali Maxamed Baarleex oo ka mid ahaa dadkii aas aasay dawlad goboleedka Galmudug ayaa ku dhawaaqay inuu u tartami doono xilka madaxwaynaha dawlad goboleedka Galmudug oo dhawaan la filayo in la qabto doorashadiisa. Ilo ku dhaw Mr Baarleex ayaa warbaahinta u xaqiijiyay inuu go’aansaday ka mid noqoshada dadka u […]